Amin'ny taona 2020 ireo fiasa vaovao ireo dia ho tonga amin'ny Photoshop amin'ny iPad | Famoronana an-tserasera
Manana isika ny kinova voalohany amin'ny Photoshop traikefa amin'ny iPad, ary ireo tovolahy ao amin'ny Adobe dia nilaza taminay ny vaovao azontsika antenaina amin'ny tapany voalohany amin'ny taona 2020.
Kinova voalohany efa niorina ary izay dia miavaka amin'ny toetra sasany toa ny fisafidianana lohahevitra na izany angona izany eo amin'ny rahona ho an'ny fidirana haingana sy mora avy amin'ny fitaovana rehetra. Miresaka momba ny kinova iPad foana. Andao hojerentsika ny vaovao ho avy.
Adobe dia maniry fifantina zavatra amin'ny iPad miaraka amin'ny Photoshop ho fanandramana tsotra sy «hendry». Niresaka voalohany izahay, nandritra ny tapany voalohany tamin'ny taona 2020, momba ny "Refined edge" ary hahatratra ity kinova ity izy. Fitaovana ilaina ho an'ny mpamorona ao amin'ny Photoshop ary hananantsika izany tsy ho ela.
Afaka miantehitra ihany koa isika safidy miolakolaka sy fanitsiana. Amin'ny lafiny iray, ny fampidirana ny Curves ho an'ny fanitsiana tonal sy haavo ahafahana mamela ny loko misy azy araka izay tadiavintsika sy bebe kokoa.
Eritrereto ny fomba ahafahanao mampiasa a amin'ireo endri-javatra ankafizin'ny Adobe Fresco: ny fahatsapana ny borosy. Amin'ny fotoana mety vitantsika ahodino ny lamba mba hahitana ny toerana mety ho an'ny zoro rehetra.
Adobe koa dia manana zava-baovao hafa ho an'ny Photoshop amin'ny iPad ary ity dia ny fampidirana Lightroom. Ny tanjona dia ny hanomezana feno fampidirana ny workflows Lightroom ary Photoshop amin'ny iPad. Ary ho an'ity dia samy manomboka miara-miasa ny ekipa Photoshop sy ny Lightroom. Ny mpampiasa farany dia afaka manamboatra sary manta amin'ny Lightroom premium amin'ny iPad-ny ary mitondra azy ireo any amin'ny Photoshop.
Un 2020 izay toa mahery vaika amin'ireo bandy ao amin'ny Adobe sy ao amin'ny Photoshop izay hanampy integer hanome bebe kokoa ny tenany. Elaela vao ho Photoshop feno kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ny vaovao tonga amin'ny Photoshop amin'ny iPad amin'ny tapany voalohany amin'ny taona 2020